तुलानारायण भन्नुहुन्छ, ‘बुद्ध एयरको फ्रन्ट डेस्कमा बस्ने कर्मचारीहरुको व्यवहार अत्यन्त रुखो हुन्छ’ | सहारा टाइम्स
Home » Main-News » तुलानारायण भन्नुहुन्छ, ‘बुद्ध एयरको फ्रन्ट डेस्कमा बस्ने कर्मचारीहरुको व्यवहार अत्यन्त रुखो हुन्छ’
तुलानारायण भन्नुहुन्छ, ‘बुद्ध एयरको फ्रन्ट डेस्कमा बस्ने कर्मचारीहरुको व्यवहार अत्यन्त रुखो हुन्छ’
SAHARA TIMES Tuesday, October 15, 20190No comments
काठमाडौं असोज २८ गते । राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका संघीय सांसद प्रमोद साहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट आज पक्राउ गरी उनलाई जनकपुर पुर्याएको छ ।
सांसद साहलाई पक्राउ गरेको विरोधमा राजपा नेपाल आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ भने विभिन्न कोणबाट त्यसको टिक्का टिप्पणी पनि भइरहेको छ । राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहले पनि आफ्नो फेसबुकमा चार बुँदे टिप्पणी लेख्नु भएको छ । प्रस्तुत छ, उहाँले गरेको टिप्पणी जस्ताको त्यस्तै ।
१. हिजो जनकपुर बिमानस्थलमा भएको घटना दुर्भाग्यपूर्ण थियो भने आज सांसद प्रमोद साहलाई जुन शैलीमा प्रकाउ गरिएको छ, त्यो खेदजनक छ ।
२. कसै कसैले सांसद प्रमोद साहको गिरफतारीलाई अफताब आलम र कृष्णबहादुर महराको गिरफतारीसँग जोडेर सरकारको कदमलाई सराहनीय भन्दै टिप्पणी गरिरहेका छन् । प्रमोद साहको गिरफतारीलाई अघिल्ला दुई गिरफतारीसँग तुलना गर्न मिल्दैन् । महरा र आलमको गिरफतारी गम्भीर प्रकारका अपराधसँग सम्बन्धित छ । जनकपुर विमानस्थलको घटना सामान्य प्रकृतिका हुन् । तथापी सांसदहरुको गिरफतारीमा आम मानिस खुशी हुनु राम्रो कुरा पटक्कै होइन् । आम मानिसले सांसदहरुको ब्यबहारमा थप सुधारको अपेक्षा राख्नु स्वभाविक हो ।
३. सांसद प्रमोद साहले बुद्ध एयरको उडान ढिलाई भएको कारण आक्रोशीत हुँदा एयरलायन्सका कर्मचारी र स्थानिय प्रशासन दुबैले बडो सक्रियतापूर्वक कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाएको देखियो । स्मरण रहोस, केही महिना अघि प्रदेश सभा सदस्य चमेली देबी दासलाई धनुषाको सिडियोले गाली गलौच गर्दै दुब्र्यबहार गर्दा कतै कुनै कारबाही भएको सुनिएन् । माननिय चमेली देबी दास स्वयंले सिडियोबाट गाली गलौच र दुब्र्यबहार खेपेको भिडियो सार्वजानिक भएको थियो । सांसद प्रमोद साहमाथीको कारबाहीमा अदालत र प्रशासनको जति जागरुकता देखिएको छ, त्यस प्रकारको जागरुकता आम मानिससँग सरोकारका सबालहरुमा देखिदैँन् । मधेसमा खटिएका प्रहरी, प्रशासनहरु अपवादबाहेक सम्प्रदायिक भावनाबाट ग्रसित भएर बोली, वाणी, ब्यवहार गर्नु खेदजनक छ ।
४. बुद्ध एयरको सेबामा प्रशस्त सुधारको आबश्यक्ता छ । म बुद्ध एयरको प्लाटिनम कार्ड होल्डर यात्रु हुँ । बरोबर गरिने यात्राको प्रत्यक्ष अनुभवको आधारमा भन्न चाहन्छु, बुद्ध एयरको फ्रन्ट डेस्कमा बस्ने कर्मचारीहरुको ब्यबहार अत्यन्त रुखो रहने गरेको पाएको छुु । काठमाण्डौमा पनि यदाकदा रुखो ब्यबहारका स्टाफहरु रहने गरेका अनुभव छ । जनकपुरको डेस्कमा बस्नेहरुको ब्यबहार खासै राम्रो रहेको अनुभव छैन् । मेरो ब्यत्तिगत अनुभवमा अन्य ठाऊँको तुलनामा जनकपुर र सीमराको उडानमा एयरलाइन्सका कर्मचारीहरुको ब्यबहार अलिक बढी नै रुखो रहने गरेको हुन्छ । तुलनात्मकरुपमा यती र श्री एयरलाइन्सका कर्मचारीहरुको ब्यबहार नम्र र सेवा प्रशंसनीय रहेको हुन्छ । बुद्ध एयरको उडानमा ढिलाई हुनु त कुनै नौलो कुरा नै रहेन् ।
जनकपुर घटनामा बुद्ध एयरले घुर्की देखाउनुको कुनै तुक छैन् । गल्ती दुबै पक्षबाट भएको छ तर सांसदलाई गिरफतार नै गरिहाल्नुपर्ने प्रकृतिका घटना होइन् यो । तथापी सांसदको आक्रोश, एयरलाइन्सको घुर्की, अदालत र प्रशासनको सम्प्रदायिक शैलीको सक्रियता सबै दुर्भाग्यपूर्ण छ ।